म सहइन्चार्ज भएपछि उहाँ आतिनुभयो (अन्तरवार्ता) | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » म सहइन्चार्ज भएपछि उहाँ आतिनुभयो (अन्तरवार्ता)
म सहइन्चार्ज भएपछि उहाँ आतिनुभयो (अन्तरवार्ता)
–सहइन्चार्ज, प्रदेश २, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)
प्रदेश २ को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विवाद देखिएको छ । त्यो विवादले हातपातको स्थिति समेत सृजना भयो । मधेशमा अहिले नेकपाको दुईटा गुट देखिएको छ । एउटा महेन्द्र पासवानको गुट र अर्को प्रभु साहको गुट । प्रभु साह प्रदेश अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले जिल्ला कमिटी गठन गर्दा मनपरि गरेको आरोप महेन्द्र पासवान गुटको छ । र, प्रदेशका अध्यक्ष प्रभु साह, इन्चार्ज सत्यानारायण मण्डल, स्थायी समिति सदस्य रघुवीर महासेठ लगायतमाथि कारवाहीको माग गर्दै पार्टीमा निवेदन दर्ता पनि गराएको छ । यता, प्रभु साहको गुटले पनि यी सबै विवादमा हात रहेको भन्दै नेकपाका सचिवालय सदस्य माधव कुमार नेपाल र स्थायी समितिका मातृका यादवमाथि कारवाहीको माग गरेको छ । यस्तो रस्सा कस्सीमा प्रदेश २ को नेकपा चलिरहेको छ । प्रस्तुत छ यिनै सन्दर्भमा प्रदेश २ का सहइन्चार्ज महेन्द्र पासवानसँग सहारा टाइम्सले गरिएको कुराकानीः
प्रदेश २ को नेकपामा खास विवाद के हो ?
–पार्टीले एकीकरणको प्रकृया लगभग अन्तिमचरणमा पुर्याएको छ । केन्द्रमा केन्द्रीय कमिटीको एकता प्रकृया टुङ्गो लागेपछि प्रदेश, जिल्ला, जनवर्गीय संगठन, स्थानीय तहको महानगरपालिकासम्मको इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको टुङ्गो लगाएको छ । पार्टीको कार्यविभाजन अन्तर्गत जुन कमरेडहरुले जिम्मेवारी पाउनुभयो । त्यसमध्ये कतिपय ठाउँमा उहाँहरुले पार्टीले दिएको निर्देशन, अन्तरपार्टी निर्देशिका, मापदण्ड अनुसार जिल्ला तथा प्रदेश कमिटी गठन गर्नुभएको देखिएको छैन । त्यो अवस्था दुई नम्बर प्रदेशमा अलि बढी देखिएको छ । प्रदेशका पदाधिकारी खासगरि कार्यकारी हिसाबले कमरेड प्रभु साह र कमरेड सुमन प्याकुरेलले प्रदेश कमिटीका अन्य पदाधिकारी तथा नेतासँग छलफल गरेर प्रदेश कमटी र जिल्ला कमिटी चयन गर्नुपर्ने थियो । तर उहाँहरुले कसैसँग कुनै पनि प्रकारको सल्लाह नगरिकन आफ्ना मनले विभेदपूर्ण तरिकाले जिल्ला कमिटीहरु बनाउनुभयो । जुन साथीले पार्टीमा जीवन र जवानी लगाउनु भएको छ । त्यस्ता साथीलाई उहाँरुले पाखा लगाउने काम गर्नुभएको छ । आफ्ना आसेपासे, पार्टीका सदस्य पनि नरहेका, पार्टीमा कुनै योगदानै नरहेका व्यक्तिहरुलाई हुल्ने काम उहाँहरुले गर्नुभयो । प्रदेश कमिटीमा गडबड गर्दा साथीहरुले नजरअन्दाज गर्नुभयो कि पार्टीमा सबैलाई लग्नुहुन्छ, सबै कुरा मिलाउनु हुन्छ । यो कमिटीमा भएन भने अर्को पनि मिलाउनु हुन्छ भनि आशमा प्रदेश कमिटी गठनको समयमा त्यति कुरा उठेका थिएन तर जिल्ला कमिटी गठन हुँदा उहाँहरुले फेरि त्यस्तै अनियमितता र नेताहरुमाथि अन्याय गर्दा अहिले असन्तुष्टि व्यक्त भएको हो । पार्टीलाई विधि विधान तथा नीति अनुसार चलाउनु भन्दा पनि केही नेताको एकलवादी सोचका अनुसार सञ्चालन गर्न खोजिएको हो । हामीले बारम्बार त्यसलाई सच्याउन भनियौं तर उहाँहरुले त्यसलाई ध्यान दिनुभएन र गुटभित्र आफूलाई बलियो बनाउने काम गर्नुभयो ।
पार्टीभित्र जेजस्तो विवाद देखिएपनि त्यसलाई छलफल र संवाद सल्टाउनु पथ्र्यो तर हातपातकै अवस्था किन सृजना भयो त ?
–हातपात भएको कुरा मलाई थाह भएन । म पनि मेडियाबाट जानकारी पाएको हुँ । तर जे भयो त्यो गलत भयो, त्यस्तो हुनुहुँदैन्थ्यो । यद्यपी म त्यसलाई परस्थितिको उपज भन्छु । उहाँहरुले जे परस्थिति सृजना गर्नुभयो, त्यसले गर्दा यो अवस्था सृजना भएको हो । पार्टीमा समस्या आएको थियो भने त्यसलाई समाधान गरेर मात्र अर्को कदम चाल्नु पथ्र्यो । केन्द्रबाट अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, महासचिव कमरेड विष्णु पौडेल, सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाल लगायतका वरिष्ठ नेताहरुले पनि जिल्ला कमिटी गलत ढंगबाट गठन भएको हो, त्यसलाई सच्याउनुस् भनि पटक पटक प्रभु साहहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रदेशमा पनि विभिन्न कमरेडहरुले गलत भइरहेको छ, त्यसलाई सच्याउनुस् भनि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि उहाँहरुले वास्ता गर्नुभएको थिएन । पार्टीले दिएको निर्देशन, अन्तरपार्टी निर्देशिका, कमिटी बनाउने विभिन्न मापदण्डहरु बनाएर दिएको थियो तर सबैलाई उल्लघंन गर्दै अगाडि बढ्नुभयो ।
यतिकै लागि मात्र बर्दिवासमा हातपात भयो त ?
–पार्टीले निर्देशन दिएपनि उहाँहरुले त्यसलाई सच्याउनु भएन । गलत मान्छेलाई पार्टीमा हुल्नुभयो । त्यसकारणले जिल्लाहरुमा असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको थियो । जिल्ला कमिटी गठन गलत ढंगबाट भएको भन्दा भन्दै साउन २२ गते नै सपथग्रहण गराउन प्रभु साहले खोज्नुभएको थियो । केन्द्रले निर्देशन दिएपछि सपथग्रहणलाई रोक्नु भयो । र, उहाँहरु काठमाडौ आउनु भयो पार्टी नेताहरुको बीचमा एउटा छलफल भयो । छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरु मातृका यादव, रघुवीर महासेठ, गिरीराजमणि पोखरेल लगायतका नेताहरु पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले प्रभु साह र सुमन प्याकुरेलहरुलाई जिल्ला कमिटीको विवादलाई समाधान गरेर मात्र सपथग्रहण कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिनुएको थियो । म र नागेन्द्र चौधरी प्रदेशको सहइन्चार्जमा आइसकेपछि पनि हामीसँग कुनै सरसल्लाह गर्नुभएन । जबकी प्रदेश कमिटीको बैठक बसेर सबैसँग सल्लाह गरेर जिल्ला कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । साउन २२ गते रोकिएका सपथग्रहण पुनः गराउन लागिएको पनि सुनियो । कुनै समस्या समाधान नै नगरिकन पुनः सपथग्रहण गराउन लागेको भनि सुनेर आश्चर्य लाग्यो ।
कस्तो आश्चर्य ?
सपथग्रहण हुन लागेको बारेमा फेरिपनि कसैसँग कुनै छलफल गर्नुभएको थिएन उहाँहरुले । यहाँसम्म कि अध्यक्ष प्रचण्डले जिल्ला कमिटी सच्याएर कार्यक्रम गर्नुस् त्यसमा म र महासचिव कार्यक्रममा भाग लिन आउँछु भन्नुभएका थियो तर उहाँको निर्देशनलाई पनि वेवास्ता गर्दै भदौं २४ गतेका लागि शपथग्रहणको कार्यक्रम तय गर्नुभएका थियो उहाँहरुले । त्यो सपथग्रहणमा आआफ्नो मान्छेलाई मात्र बोलाएर कार्यक्रम गर्न लाग्नु भएको थियो । हामीलाई कुनै जानकारी नै दिएका थिएनन् । प्रदेशका केही साथीहरुले यो सपथग्रहणको बारेमा सल्लाह गरेर नागेन्द्र चौधरी र सत्रुधन महतोलाई साथमा लिएर भदौं २३ गते साँझ काठमाडौ आएाक थियौं । र सोही दिन अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई सपथग्रहणको बारेमा जानकारी गराएका थियौं । उहाँहरु पनि आश्चर्यमा पर्नुभयो । उहाँहरुले भन्नुभयो, हामीले पटक पटक जिल्ला कमिटी सच्याउन भन्दा पनि उहाँहरुले मान्नु भएन जवर्जस्ती सपथग्रहण गराउन लाग्नु भएको छ । त्यो कार्यक्रममा हामी जाँदैनौं ।’ त्यही दिन राती विश्वनाथ साहले सत्रुधन महतोलाई फोन गरेर भन्नुभयो कि सपथग्रहण कार्यक्रम स्थगित भयो । छवटै जिल्लाको सपथग्रहण स्थगित भएको भन्नुभएको थियो, यसको बारेमा सबैतिर जानकारी गराई दिनुस् पनि भन्नुभएको थियो । हामीले सबैतिर जानकारी गरायौं कि सपथग्रहण स्थगित भयो । तर मैले राती १० वजे प्रदेशका इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डललाई सम्पर्क गरेर बुझ्दा चारवटा जिल्लाको मात्र स्थगित भएको छ । सिरहा र सप्तरीको सपथ हुन्छ भन्नुभयो । मैले प्रभु साहलाई फोन गरे । उहाँले सपथग्रहण स्थगित भइसकेको भन्नुभयो । हामी झन कन्फ्युज भयौं । सिरहा र सप्तरीमा झन विवाद छ । त्यहाँ किन यस्तो नगरेको भनि सत्यनारायण मण्डललाई जानकारी गराउँदा उहाँले कुनै वास्ता गर्नुभएन । र फोन राख्नुभयो । हामी विहान काठमाडौबाट बर्दिवासका लागि हिड्यौं । धुलीखेल पुग्दा प्रभु साहसँग फोनमा कुरा गर्दा उहाँले त्यही कुरा पुन दोहोर्याउनु भयो कि सपथग्रहण स्थगित भएको छ । काठमाडौ फर्कौ जस्तो लाग्यो फेरि सत्यनारायण मण्डललाई फोन गरे । उहाँले स्थगित भएको छैन भन्नुभयो । हामीले विचार गर्यौं कि जाउँ त्यही । त्यही बसेर सल्लाह गरौंला । सिन्धुली पुग्दा खबर आयो कि बर्दिवासमा झडप भयो । अन्यायमा परेको आक्रोश थियो । त्यहाँ पुग्दा साथीहरु धर्नामा बस्नु भएको थियो । हामीले साथीहरुसँग कुरा गरेर चित्त बुझाउने काम गर्यौं । जब सबैजना आआफ्नो घरतिर लागे अनि राती राती ८ वजे प्रभु साहहरुले कसैलाई जानकारी नै नदिइकन सपथग्रहण गराउनुभयो । त्यहाँको झडप प्रभु साह र सुमन प्याकुरेलको हठ र अहंकारका कारणले भएको हो र त्यसको जिम्मेवारी उहाँहरुले नै लिनुपर्छ ।
शुरुमा ठिकठिकै थियो तपाई सहइन्चार्ज भएपछि अलिकति विवाद बढेको हो जस्तो लाग्छ त्यस्तो किन ?
–विवाद त एकता प्रकृया शुरु भएदेखि नै थियो । तर साथीहरुले नजर अन्दाज गर्दै आइरहनु भएको थियो । सच्याएर अगाडि बढ्नु हुन्छ जस्तो सबैलाई लागि रहेको थियो । तर जिल्ला कमिटीसम्म आइपुग्दा अलि बढी नै आरजकता देखाउनुभयो प्रभुजीहरुले । मनपरि, छाडा र गुटगत हिसाबले पेलेर जाने उहाँहरुले सोच बनाउनु भएको थियो । हामीले सिरहामा मात्र त्यस्तो गर्नुभएको छ कि जस्तो लागेको थियो । हेर्दा त आठवटै जिल्लामा समस्या देखियो । सप्तरीमा सुमन र सप्तरीमा विश्वनाथ साहले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्नुभयो । रौतहत, बारा, पर्सामा प्रभुजीले मनमानी गर्नुभयो । तीनजनाले जिल्ला बाँडफाँड गर्नुभएको रहेछ । त्यसपछि म र नागेन्द्रजी सहसचिवमा आएपछि उहाँहरु झन आतिनुभयो । उहाँहरुले एकल ढंगबाट पार्टीमा गतिविधि गरिहनु भएको थियो । हामी आएपछि आतिएर प्रभु साहले राजिनामा पनि दिनुभएको थियो ।
प्रभु साहको पनि त्यही आरोप छ कि केन्द्रले काम गर्न दिइरहेको छैन केन्द्रले हस्तक्षेप गरिरहेको छ के त्यो सही हो ?
–पार्टीको विधान, नियमावली, अन्तरपार्टी निर्देशिका, केन्द्रीय पार्टी सचिवालयले गरेको निर्णय र विशेष परिपत्रलाई उहाँहरुले मान्नुभएन । अनि केन्द्रले कहाँ हस्तक्षेप गरेको छ, तपाई नै भन्नुस् । केन्द्रले विधान अनुसार काम गर्न भनेको छ भने त्यो कसरी हस्तक्षेप भयो । विधान अनुसार वैधानिकता स्थापित हुनुपर्छ हाम्रो माग हो । पार्टी कुनै एकआध व्यक्तिको मनोगत र व्यक्तिगत इच्छाले चल्नु हुँदैन । पार्टीले सर्वसम्मतिबाट जे निर्णय गरेको छ त्यसलाई विधिवत ढंगबाट कार्यान्वयनमा लैजानु पर्यो । सहमति र समझदारीमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्यो ।
प्रभु साहले त म सिनियर हुँदा हुँदै जुनियरलाई किन प्रदेशको सहइन्चार्ज बनाएको भन्दै हुनुहुन्छ नि । प्रभु र तपाईमध्ये को सिनियार, को जुनियर हुनुहुन्छ ?
–प्रभु साहको नैतिकताले पनि यो कुरा नभन्नु पर्ने हो । उहाँले भ्रम छर्ने काम गरिरहनु भएको छ । म पूर्व मोटो मसालदेखि एकता केन्द्र हुँदै नेकपा माओवादीले युद्धको तयारी गरिरहेकै अवस्थामा अनेरास्ववियु क्रान्तकारीको केन्द्रीय सदस्य भएको थिए । त्यसपछि, पार्टीको जिल्ला कमिटीको सदस्यमा काम गर्दै सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी उदयपुर लगायत अन्य ठाउँमा पनि काम गरेको हुँ । पार्टीमा मातृका यादवपछिको सकेन्ड भूमिका मेरो रहेको छ । राजनीतिक, सांगठनिक, वैचारिक हिसाबले पार्टीमा सक्रिय थिए । २०५७ भदौं २७ गते भारतको सिलिगुडीमा एउटा भेला भयो । त्यो भेलाले मलाई मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको सस्थापक संयोजकमा चयन भएको थियो । त्यो बेला मात्र प्रभु साह पार्टीको सम्पर्कमा आउनु भएको हो । म संयोजक हुँदा उहाँ मोर्चाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । पछि मलाई नै अध्यक्ष बनाउने कुरा भएको थियो तर सम्मानित हिसाबले जयकृष्ण गोइतलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो र मलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएको थियो । पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा मधेशबाट म र श्रवण यादव मात्र सहभागी भएको थिए । मातृका यादव जेलमा हुनुहुन्थ्यो । यसरी प्रभु साह पार्टीमा म भन्दा अगाडि कहिले जान सक्नुभएन । म मात्र होइन, मधेशमा उहाँभन्दा धेरै सिनियर नेता हुनुहुन्छ तर उहाँ कसैलाई मान्नु हुन्न, के को अंहकार छ उहाँमा थाह छैन । भरत साह समेत प्रभु साहभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ ।
मधेशमा यसप्रकारको द्धन्द र आन्तरिक विवाद पहिलादेखि नै हुँदै आइरहेको थियो, प्रदेश २ मै मात्र यस्तो किन हुन्छ ?
–निम्न पुँजीवादी चिन्तन र आत्मकेन्द्रीयतावादका कारणले यस्तो भएको हो । जतिखेर अराजक र दवगं शैलीले पार्टी चल्दैन । अरुलाई होच्याउने, अरुलाई दवाउने काम प्रभु साहहरु पहिलादेखि नै गर्दै आइरहनु भएको छ । उहाँकै कारण मधेशमा पार्टीभित्र द्धन्द हुने गरेको छ । उहाँ गुटबन्दीमा विशेष जोड दिनुहुन्छ । साझा र सामूहिक काम गरौं भने सोच उहाँमा देखिएको छैन । त्यही भएर यस्तो समस्या देखिएको हो । अहिले उहाँ प्रदेशको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । संयम भएर काम गर्नुभएन भने यसको घाटा उहाँलाई नै लाग्छ ।
अब यसको समाधान के हो त ?
–पार्टीले तयार पारेको विधि र विधान अनुसार सबै चल्नुपर्छ । प्रदेश तथा जिल्लामा देखिएका असन्तुष्टिलाई मिलाउनु पर्यो । अहिले गठन भएका जिल्ला कमिटीहरु खारेज गरेर पुनः गठन गर्नुपर्यो अनि मात्र समस्या समाधान हुन्छ । वैधानिक ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्यो । पार्टीलाई राम्रो बनाउनका लागि समस्या हल गर्नैपर्छ ।